Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း)
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
နားကနေနဖားချေးအရမ်းထုတ်မိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ရှိနေပြီးသား နားဖာချေးက နားအတွင်းပိုင်းသို့ အရမ်းထိုးသွင်းခံရတဲ့အခါမှာ နားဖာချေးပိတ်တတ်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် ပိတ်နေတဲ့နားကနေ ဘာမှကြားရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိတ်နေတဲ့ နားဖာချေးတွေထုတ်လိုက်ရင်တော့ ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေအများစုမှာတော့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေ အလုပ်ဖြစ်ကြပြီး ဆရာဝန်ကလည်း ပိတ်နေတဲ့ နားဖာချေးတွေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နားဖာချေးပိတ်ခြင်းက အတွေ့ရအများဆုံး နားပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။။
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နားဖာချေးပိတ်ခြင်းရဲ့ အတွေ့များတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နားထဲတွင် ပြည့်ကျပ်သိပ်နေသည်ဟု ခံစားရခြင်း
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာတွေ ရှိနေမယ် ဒါမှမဟုတ် မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွေ မတူညီကြပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာက အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နားဖာချေးကို နားအပြင်တစ်ဝက်ကားရံပေးထားတဲ့ အရေပြားကနေ ထုတ်ပေးတာပါ။ နားအခေါင်းပေါက်တစ်လျောက်မှာရှိတဲ့ နားဖာချေးနဲ့ အမွှေးသေးသေးလေးတွေဟာ ဖုန်တွေနဲ့ အခြားပြင်ပစ္စည်းတွေကနေ နားစည်လိုမျိုး နားအတွင်းပိုင်း အင်္ဂါတွေ မထိခိုက်မသွားအောင် ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ လူအများစုမှာတော့ နားဖားချေးအနည်းငယ်လေးက ကွာကျလိုက် အသစ်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ သူ့ဘာသာ မပိတ်ပဲရှိနေပါတယ်။ နားဖာချေးအမြောက်အများထုတ်လုပ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ထိရောက်စွာ မသန့်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နားဖာချေးတွေပုံလားပြီး နားပိတ်သွားလိမ့်မယ်။ နားသန့်ရှင်းဖို့ ဂွမ်းတန်နဲ့ အခြားသော ပစ္စည်းတွေထည့်တတ်တဲ့ လူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက နားဖာချေးမပြင်မထွက်စေပဲ အထဲကို ထိုးသိပ်သလိုဖြစ်နေစေပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
နားဖာချေးပိတ်မပတ်ကို ဆရာဝန်က နားအတွင်းသို့ အလင်းထိုးပြီး ပုံကြီးချဲ့ပေးသော အထူးပစ္စည်းကိရိယာတစ်မျိုး(အော်တိုစကုပ်)ဖြင့် ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Earwax blockage (နားဖာချေးပိတ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်က ပိုလျံနေတဲ့ နားဖာချေးတွေကို ကိရိယာအကွေးလေးဖြင့် ခြစ်ထုတ်ပေးနိုင်သလို နားကိုစစ်ဆေးနေရင်းနဲ့ စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးနွေးလေးဖြည့်ထားသော ရာဘာဘောလုံးပါဆေးထိုးအပ် ဒါမှမဟုတ် ဝါးတားပစ်ခ်လို့ခေါ်တဲ့ ကိရိယာဖြင့်လည်း ရေဆေးထုတ်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခဏခဏပြန်ဖြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Carbamide peroxide (Debrox
Earwax Removal Kit, Murine Ear Wax Removal
System) လိုမျိုး နားဖာချေးထုတ်ဆေးဝါးတွေ အသုံးပြုခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဆေးဝါးတွေဟာ နားစည်ကို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်စေတာကြောင့် ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသာ အသုံးပြုပေးပါ။
နားဖာချေးပိတ်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက နားဖာချေးပိတ်ခြင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
နားဖာချေးကို ပျော့အောင်လုပ်ပါ။ ကလေးလိမ်းတဲ့အဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဂလစ်ဆရင်းနဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်စိုက် တစ်ခုခုကို မျက်လုံးအစက်ချတဲ့ပစ္စည်းဖြင့် ထည့်ပေးပါ။
ရေနွေးအသုံးပြုပေးပါ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာပြီး နားဖာချေးပျော့သွားတဲ့အခါမှာ ရော်ဘာဘောလုံးပါဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ရေနွေးနွေးတွေကို နားပေါက်အတွင်းသို့ ထည့်ပေးပါ။ ခေါင်းစောင်းလိုက်ပြီး နားပေါက်ဖျောင့်သွားစေရန် နားရွက်ကို နောက်သို့၊အပေါ်သို့ ဆွဲတင်ပေးပါ။ ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာ အခြားတစ်ဖက်သို့ ခေါင်းစောင်းလိုက်ပြီး ရေတွေထွက်သွားပါစေ။
အခြောက်ခံပါ။ အားလုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ နားအပြင်ဘက်ကို မျက်နှာသုတ်ပဝါ ဒါမှမဟုတ် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ဖြင့် ညင်ညင်သာသာ အခြောက်ခံပေးပါ။ ပိုလျံနေတဲ့ နားဖာချေးတွေ မထွက်မသွားမချင်း မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပေးပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း နားဖာချေးတွေပျော့စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေက အပြင်လွှာကိုသာ လျော့ရဲအောင်လုပ်ပေးပြီး နားအတွင်းပိုင်း ဒါမှမဟုတ် နားစည်နားသို့ ရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။
ကုသမှုအတော်အတန်ပြီးလို့ တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။
ဆေးဆိုင်တွေမှာ ရရှိနိုင်မယ့် နားသန့်စင်ရေးပစ္စည်းအစုံလိုက်တွေကလည်း ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
ကလော်မထုတ်ပါနှင့်။ စက္ကူကလစ်၊ ဂွမ်းတံ၊ဆံထိုးတို့ဖြင့် နဖားချေးကို ကလော်မထုတ်ပါနှင့်။ နားဖာချေးကို နားထဲတွန်းပို့သလိုဖြစ်သည့်အပြင် နားအတွင်းပိုင်းနဲ့ နားစည်တို့လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
မေးစရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို သိရှိနားလည်စေနိုင်ရန် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Earwax blockage. http://www.mayoclinic.org/
ovc-20341213 . Accessed September 18, 2017.
Earwax Blockage. http://www.healthline.com/health/
wax-blockage#overview1 . Accessed September 18,
Ortitis Externa (နားစည်အပြင်ပိုင်းရောင်ရမ်းနာ)
Ear Infections (နားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း)
ကလေးနားပိုးဝင်ခြင်း- အကြောင်းရင်း၊လက္ခဏာများ၊ ကုသမှု
သင့်နားထဲ တစ်ခုခုဝင်နေတာကို ဘယ်လိုထုတ်မလဲ